မနေ့ညနေက ဘုန်းကြီးကျောင်းကို သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ ထပ်ရောက်ဖြစ်တယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ ကျောင်းထိုင်နဲ့ပါတွေ့လိုက်တယ်။ ဘုန်းဘုန်းက သဘောကောင်းတယ်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းဆောက်ဖို့ ကိစ္စလူကြီးတွေဆွေးနွေးကြတယ်။ အဆင်တော့ မပြေသေးဘူး။ ဒီလို့ပဲ ဖြည်ဖြည်းနဲ့တော့ အဆင်ပြေသွားမှာပါ။
ဘုန်းဘုန်းက ဗုဒ္ဓနေ့ စာအုပ်ထုတ်ဖို့ ပြောတယ်။ မျက်နှာဖုံးဒီဇိုင်းတွေဆွဲပေးရမယ်တဲ့။ ကုသိုလ် ယူချင်သူ Designer များ ဆက်သွယ်ပါ အခုချက်ချင်းကြီးတော့ မဟုတ်သေးပါဘူး။ အစ်ကိုကြီး ကိုတိုးကတော့ ကူညီမယ်လို့ ပြောထားပါတယ်။ လုပ်ဖို့က လိုတော့ လိုပါသေးတယ်။ ကြိုပြီးပြောထားတာပါ။
ဒါနဲ့ စကားမစပ်ဗျာ။ ကျွန်တော့်မှာ Font တွေလိုနေတယ်ဗျာ။ ရှိတဲ့သူများ ကူညီပါအုံး။ လိုချင်တဲ့ Font က ကျုံးမြို့ရိုးတို့ ဘုရား ၂၄ ပစ္စည်းတို့ပါတဲ့ Font တွေပါ။ ဘယ်မှာမှ ရှာမရလို့ ဒီမှာ ရေးပြီး အကူအညီ တောင်းရတာပါ။ ရှိတဲ့သူများ ကူညီလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဒီနေ့ တော်တော်ပင်ပန်းနေပြီ အချိန်လည်း မစောတော့ဘူး။ အီပိတ် ... အိပ်ပြီဗျာ။
Tell me exactly what kind of font do you need, I'll find out for you and mail to you as attachment files.
CMS 11:00 am
Especially, I do need the font that include symbols like moat, pagoda and LawKaNat. But unfortunately, I don't remember the exact font name.
MYO HAN HTUN 1:14 am
Don't worry for it. I have those fonts with me.